Commentaires - Amboara Tsianjery ho fahatsiarovana - Ambohibary, vohitra soa !
Anisan'ny nanamarika ny fahazazana ireto tsianjery ireto ! Atolotra ho antsika ho fahatsiarovana sy fankasitrahana an'i Mmes Jeanne, Odette, Rondro, Marosoa, Jacquette tamin'izany, tsy adino ihany koa ry Mrs Martin, Michel, Vigne, Andry, Alfred, Achile, Basile teo an'elan'elan'ny taona 1980 ka hatramin'ny taona 1990. EPP Ambohibary
Iza iry ?
-Iza iry ambony iry o?
Izaho ihany ity o,
-Maninona eny in-dry o?
Izaho mikotroka atody o!
-Firy ny atodin-dry o?
Telo sy efatra ihany o,
-Mba omeo iray aho hoe
Raha mba mikotroka in-dry
Mikotroka ihany aho
Fa tsy mahavanona
Ny akoholahy mitsoka mozika
Ny akohovavy manao riorio
Ny akohokely manao kiokio
kiokiokio, tandremo lahy
kiokiokio, tandremo vavy
Etsy babeko, Razandry!
Etsy babeko ianao :
Ny saiko tsy mety tafandry,
Tia ka tsy afa-mandao!
Tazano fa sasatra miandry
'Reo namana te-hilalao!
Atsory malaky ny sandry
Ndeha hifoka rivo-baovao!
Etsy babeko indray ;
Ny olona tapitra mandry
Ndeha isika hody am'izay.
Jereo ny volonay
Voahogo tsara ery
Sady izay indray
Jereo ny tongotray
Toa tsy mandia tany.
Jereo ny tananay,
Madio tsara koa ,
Ary ny hohonay
Ny reninay moa
Tsy zaza be lalao
Fa Hendry sy mahay
Ka moa gaga ianao
Matoa madio zahay
DADA sy NENY
Dada malala sy neniko zay
Dia fola-damosina ery taminay
Neny nitaiza, nibaby, nanasa
Dada isan'andro torovana niasa
Zaho no tomady sy tena salama
Dada no vizana be nikarama
Zaho no olom-banona sady hendry tsara
Neny no sasatra nikarakara
Mba inona kosa no havaliko ireny
Fitiavan-tsiritran'i dada sy i neny
Manaraka tsara izay anatra omeny
Mivavaka ho azy ho valim-babeny
Anisan'ny nanamarika ny fahazazana ireto tsianjery ireto ! Atolotra ho antsika ho fahatsiarovana sy fankasitrahana an'i Mmes Jeanne, Odette, Rondro, Marosoa, Jacquette tamin'izany, tsy adino ihany koa ry Mrs Martin, Michel, Vigne, Andry, Alfred, Achile, Basile teo an'elan'elan'ny taona 1980 ka hatramin'ny taona 1990. EPP Ambohibary Iza iry ? -Iza iry ambony iry o? Izaho ihany ity o, -Maninona eny in-dry o? Izaho mikotroka atody o! -Firy ny atodin-dry o? Telo sy...
# Posté le samedi 05 mars 2016 03:18
Modifié le lundi 07 mars 2016 01:18